Zvipfuwo | Bezzia (Peji 2)
Kudya kwemavheji kwakanaka kune imbwa here? Zvinotaridza sekuti nyanzvi dzacho dzinojekesa zvakanyanya. Nhasi tinokuudza zvakadzama!
Eco-inoshamwaridza matoyi emhuka dzinovaraidza
Isu tinokupa iwe mamwe mazano ekushandisa ecological matoyi embwa, imwe nzira yekuchengetedza nharaunda.
Iwe unoda here kuziva inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve mhuka dzinovaraidza? Wobva wazvirega uchitorwa nevatinokuudza nezvazvo pano.
Ecological zvipfuwo mibhedha
Maitiro ekuwedzera ecological pet mibhedha kumba kwako, zvakatipoteredza zvine hushamwari ruzivo.
Zviratidzo zvekuti imbwa yako inokuda Zvakawanda!
Unoona here chero zviratidzo zvechipfuwo chako? Zvakanaka, isu tatova kukuudza kuti imbwa yako inokuda zvakanyanya, ichikuratidza iwe muchiito chega chega chatinotaura.
Nzira yekusarudza chikafu chembwa yako
Iwe unogona ikozvino kusarudza chikafu chembwa yako nenzira yakatendeka. Matipi ekugara uchipa zvakanakisa kune uyo ari chikamu chemhuri yako
Inonzwika muginea yenguruve uye zvazvinoreva
Kana iwe uine Guinea yenguruve kumba, iwe ungangoda kuda kuziva kuti mheremhere yese yavanoreva inoreva, isu tinokuudza!
Izvo zvaunoda kuti uzive usati wave neguinea inguruve
Kana iwe uine chipfuva chenguruve kana kana iwe uchida kuve nacho, iwe unofanirwa kuziva ruzivo rwese irwuno kuti igare ichifara padivi pako.
Yakawanda sei kutarisirwa uye kutarisirwa kunodiwa kati?
Kana iwe uchida kuva nekatsi sechipfuwo, iwe unofanirwa kuziva kuti ndechipi chemhando yekutarisisa chaunofanirwa kuchipa.
Mazano ekuchengeta katsi
Kuva nekitsi kunogona kureva zvinhu zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Vamwe vanoda katsi yekumbundira nekugara mukati ...
Hukuru kuziva kune imbwa dzeDalmatia
Iwe unoda kuziva hukuru hukuru hwembwa dzeDalmatia? Nhasi tava kuzokuudza zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvaunofanira kuziva.
Bronchitis mumakati: chii icho uye inorapwa sei
Tsvaga ruzivo rwakanyanya kukosha nezve bronchitis mumakati, chii icho uye kurapwa kwaro chii?
Katsi yako yakachena here?
Tevere isu ticha tsanangura maitiro ekuziva kana katsi yako yakachena uye chii chakanyanya kukosha chinhu iwe chaunofanirwa kuziva.
Nei ropa riine weti yako
Kana iwe wakacherekedza kuti katsi yako ine ropa mune weti yake, iwe unofanirwa kuziva ruzivo urwu nekukurumidza sezvazvinogona.
Makati uye yekugezera
Wakambofunga nezvekugeza kati yako here? Saka usarasikirwe neruzivo urwu kuti uzvidzivirire kubva mukunetseka.
Zvinhu izvo zvipfuwo zvako zvinokudzidzisa iwe
Kana iwe ukatarisa padyo, zvipfuwo zvako zvinogona kuve vadzidzisi vakakura vehupenyu. Isu tinokuudza iwe zvimwe zvakakosha izvo zvavanogona kukudzidzisa iwe.
7 chikafu chine njodzi chembwa
Imbwa hadzifanirwe kupihwa chero chinhu! Kune zvekudya zvinogona kukunzwisa zvakaipa uye kutokuuraya.
8 chikafu chine njodzi kumakati
Chero muridzi wekati anoziva kuti vanogona kuve nembiri inonaka pavanorererwa mumhuri dzevanhu ... Kunyange ...
Mutauro wakavanzika wemhuka dzinovaraidza
Kana uine mhuka dzinovaraidza, ichokwadi kuti ungade kuziva mutauro wavo wakavanzika ... kana ukanyatsotarisisa uchaziva zvinhu zvavanokuudza pasina mazwi.
Gadzirira imbwa yako yekushambidzika kwakanaka
Iwe haufanire kugara uchiendesa imbwa yako ku canine salon nekuti inoda mari, unogona kumugadzirira kubva kumba! Zvichataridzika zvakanaka kwazvo!
Kana iwe uchida kutora katsi yakatsauka, iwe unofanirwa kuteedzera aya matipi kuti uzviite zvakanaka uye kuti imi nekati mune zvakanaka.
Batsira mukugara kwemhuka pasina kushandisa mari
Kana iwe uchida kuchengeta mhuka usingashandisi mari, zvinokwanisika kuti uzviite ... Tevedzera aya matipi uye iwe uchave unobatsira mukugara kwavo zvakanaka.
Mboro yako ine pfungwa idzi mazuva ese
Kana iwe uine katsi kumba uye iri chikamu chemhuri yako, saka iwe unofanirwa kuziva kuti idzi pfungwa dzinopinda mumusoro wekati yako zuva rega rega ...
Izvo zvipfuyo zvisingawanzo nyore iwe zvaunogona kuva nazvo
Kana iwe uchida kuva nechipfuwo asi hachisi "chakajairika" usarasikirwa neino runyorwa diki rezvipfuyo zvisingawanzo. Iwe uchavada ivo vese!
Homemade Strawberry Banana Kubata Kwembwa
Nepo michero yakawanda isina kunaka kune imbwa, mastrawberry nemabhanana zvinogadzira zvinoshamisa ...
Bacon Cheddar Muttfins kune Imbwa
Usarasikirwa neichi chinonaka Bacon Cheddar muttfins recipe yeembwa! Zvipfuwo zvako zvichafadzwa.
4 imbwa dzakangwara dzinobereka
Kana iwe uri kufunga kuve nembwa uye nekuwedzera yako interspecies mhuri, saka zvinopfuura zvingangoita kuti iwe uri ...
Mazita gumi ekutanga embwa
Usapotsa aya gumi ekutanga mazita eimbwa! Kana uine imwe nhengo ye canine mumhuri yako, sarudza rimwe remazita aya!
Pfungwa dzekushandisa zhizha nemhuka yako dzinovaraidza
Kana iwe uine chipfuwo, zhizha zvakare mukana wakanaka wekunakidzwa pamwe chete ... isu tinokusiira iwe dzimwe pfungwa kuti zviite zvakakosha!
6 hombe imbwa dzinobereka hauzozvidemba kuva nadzo
Imbwa diki dziri kwese kwese, ukuru hukuru hunoshamisa munhu wese. Nekudaro, kuva nembwa hombe ...
Iwo akanakisa manomano ekudzidzisa imbwa yako
Kana iwe uchida kudzidzisa imbwa yako iwo akanakisa manomano, heino akateedzana acho. Kufara uye yakapusa kunakidzwa iwe pamwe nechipfuwo chako.
Nei Zvipfuyo Zvichiunza Iwe Mufaro
Une mhuka dzinovaraidza kumba here? Ivo chikamu chemhuri yako uye ivo zvakare vachakuunzira iwe wakawanda mufaro kanenge iwe usina kuona ...
Kuzvipira panzvimbo inochengeterwa mhuka kunoita kuti uve munhu ari nani
Kana iwe uchida kukura semunhu ... zviri nyore sekuzvipira panzvimbo inochengeterwa mhuka, iwe unozonzwa kufara nezvako!
Iwo akanakisa matipi ekuve anofara zvipfuyo
Mhuka dzako dzinofara here? Chokwadi unodaro, asi kana usiri kunyatso kujekesa, hapana chakafanana nekutevera akateedzana matipi anoshanda.
Kuhukura kwembwa kunorevei?
Iwe unoda kuziva here zvinoreva imbwa dzinochema? Heano mhinduro dzakanakisa kune iyo nguva iyo inogara ichitisiya tisina chokwadi.
Matipi ekushambidza imbwa yako nenzira kwayo chaiyo
Unoziva here kuti ndeapi matanho ekutevera kana uchigeza imbwa yako? Isu tinokurudzira akateedzana matipi akareruka aunofanira kufunga nezvazvo.
Zvakanakira kurara nembwa
Isu tinokupa iwe akateedzana mabhenefiti ekurara nembwa. Zvirokwazvo kubva zvino zvichienda mberi, husiku hwako hwuchachinja chose.
Kuchinja kwekushisa kunochinja sei imbwa dzedu
Iwe unoziva here kuti shanduko mukushisa inogona kukanganisa mhuka dzedu dzemhuka? Pano tinokusiya iwe uine zvimwe zvinoratidza kuti ugone kuzviziva.
Maitiro ekuvaraidza mhuka dzinovaraidza munguva dzeCoronavirus
Kuvaraidza zvipfuyo zvedu munguva yeCoronavirus hazvisi nyore nguva dzose. Mavhiki apfuura uye zviri kuwedzera kuoma. Pano tinokusiya uine mamwe matipi!
Iko Kusungwa Kunobata Sei Zvipfuwo
Unoziva here kuti kusungwa kunogona kukanganisa zvipfuwo? Pano isu tinoratidzira zvimwe zviyeuchidzo zvekuchengeta mundangariro, nekuti ivo vanotambura nazvo futi.
Coronavirus uye Zvipfuwo: Maitiro Ekutarisana neMamiriro Aya
Kune mibvunzo yakawanda maererano necoronavirus uye zvipfuyo. Asi nhasi tichajekesa zvimwe zvakajairika kuti tikwanise kutsungirira mamiriro aya.
Matipi ekutanga kana uchifamba imbwa panguva yekugadzwa
Aya ndiwo matanho ekutora, muchimiro chezano rekutanga, kana uchifamba imbwa uye uri uri wega. Waivaziva vese here?
Zvekutanga zvinhu mbwanana inoda kana zvasvika kumba
Tsvaga zvese zvakakosha zvinhu izvo mbwanana inoda kana zvasvika kumba kwenguva yekutanga. Ichave yakanyanyisa kugadzikana uye inodiwa munharaunda!
Disco hove: mambo wegungwa kuti vashanyi vako vadanane
Imwe yeakanaka kwazvo uye ane mavara ehove ye aquarium ndiyo discus hove, inozivikanwa nekuve nerunako rwakasiyana ...
Nhema nezve kudyisa imbwa yako
Ngano dzinokomberedza chikafu chembwa yako dzakaratidza pamberi nepashure. Naizvozvo, pano tinojekesa yega yega.
Zvikonzero nei kati ichinyanya kuwanda
Katsi yako meow yakawanda? Wobva wawana zvikonzero zvikuru nei zvisingamire meowing. Iwe unonzwisisa zvishoma zvishoma zvechokwadi!
Kuchengeta sei bvudzi rembwa
Kuchengeta vhudzi rembwa ibasa rakakosha ratinofanira kuita zuva nezuva, neimwe nzira kana imwe. Iwe unoda kuziva kuti ndeapi ari iwo akakurudzirwa iwo?
Chikafu chematsi chinonyorova chine hutano hwakawanda. Iwe unoda here kuziva izvo zvavari? Ipapo usapotsa izvo zvatinokuudza.
Zvakanakisa zvikonzero zvekutora chipfuwo chevakuru
Kugamuchira chipfuwo chevakuru nderimwe rematanho akanyanya kunaka atinogona kutora muhupenyu hwedu. Iwe unoda kuziva here izvo zvakanaka zvikonzero zviri?
Kana iwe uchida kunakidzwa ine hushamwari, imbwa yakatendeka iyo inodzivirira kwazvo mhuri yake uye isingambokusiya, iyi ndiyo azawakh imbwa dzinza. Zvizive.
Matanho ekutevera kuti uwane katsi yako
Kutsvaga katsi yako kunogona kunge kusiri nyore basa sezvazvinogona kuita. Iwe unoda here kuziva matanho anotevera?
Maitiro ekuudza kana imbwa yakatsamwa
Kana imbwa yakatsamwa, ichatipa zvakakosha kuti tinzwisise. Naizvozvo, isu tinofanirwa kuongorora chikonzero chehunhu hwavo uye izvo zvatinofanira kuita.
Zvidzidzo izvo imbwa zvinotipa isu mazuva ese
Imbwa dzinotisiira dzakateedzana dzidziso mazuva ese. Tine zvakawanda zvekudzidza kubva kwavari uye nekuda kwechikonzero ichocho, tinokusiya iwe nevamwe vavo.
Cat zvishongedzo izvo zvakakosha
Iwe unoda kuziva here kuti ndezvipi zvakakosha zvishongedzo zvekati? Pano tinokusiira iyo iyo inodiwa nechipfuwo chako hongu kana hongu.
Iyo Cold Inotapura Sei Katsi
Iyo inotonhora inobatawo katsi uye yakawanda. Iwe unoda kuziva here kuti tichazozviona sei uye ndeapi matanho akanyanya kuigadzirisa?
Maitiro ekuchengeta mazino embwa yako
Kuchengeta mazino embwa iri rimwe remabasa ezuva nezuva atinofanira kufunga nezvazvo. Izvo zvakakosha kuti tese isu navo vajaire.
Nzira dzakanakisa dzekupa kati piritsi
Kupa katsi piritsi haisi nyore nguva dzose. Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi matanho akanyanya kunaka ekutora mukufunga kuti uwane icho?
Zvinhu zvinovengwa nembwa asi iwe ramba uchiita
Isu tinokupa iwe zvinhu zvakateedzana izvo imbwa dzinovenga asi izvo zvaunoramba uchiita mazuva ese. Zvino uchanzwisisa zvinhu zvakawanda.
Zviratidzo zvekuti katsi yedu inogona kunge ichirwara
Kana katsi ichirwara pachave nematanho ezviratidzo zvinozotiudza kuti chimwe chinhu chiri kuitika. Naizvozvo, tinofanira kugara takangwarira.
Nzira yekudzivirira imbwa kubva pakuparadza zvinhu
Kudzivirira imbwa kubva pakuparadza zvinhu kana iri pamba yega inogona kuita basa rakaoma. Isu tinokuudza kuti ungazvigadzirisa sei.
Maitiro ekuvandudza kudya kwekatsi
Kuvandudza chikafu chekati harisi basa rakaoma. Isu tinongoda kutora mashoma matanho akanaka ekuti mhuka yedu ifare.
Zvinhu izvo katsi dzinovenga Zvakawanda!
Katsi dzinovenga zvinhu zvakawanda uye pamwe, zvimwe zvacho zvauri kuita mazuva ese. Tsvaga zvese zvinokuvaraidza zveizvi fimin.
Mazano ekudzidzisa imbwa
Kudzidzisa imbwa kunogona kuve kwakaomarara kupfuura zvazvinonzwika. Naizvozvo, isu tinoda akateedzana emakiyi uye yakawanda moyo murefu kune yega yega kudzidziswa.
Kazhinji akajairika manias uye kusagadzikana kwembwa
Kune zvakawanda zvinovaraidza uye zvinetswa izvo zvatinogona kuwana imbwa. Unoziva here kuti ndeapi anowanzoitika uye zvazvinoreva?
Kufamba nemhuka, zvese zvaunoda kuti uzive kuzororo rakanaka
Kana iwe ukaenda kuzororo uye uri kuenda kunofamba nemhuka, iwe unofanirwa kuziva zvimwe zvakakosha zvakakosha kuti unakidzwe zvese semhuri.
Matipi ekunakirwa zhizha nechipfuwo chako
Isu tinokuudza kuti unakirwe sei nezhizha nemhuka yako dzinovaraidza, nekuti mhuka dzinovaraidza dzinoda kutarisirwa chaiko mwaka uno.
Zvikafu zvinogona kudya katsi
Kune zvakawanda zvekudya zvinogona kudya katsi, pasina kuve chikafu chavo. Asi hongu, gara uine akateedzana ezvinogumira.
Matipi ekutanga ekufamba nezvipfuyo
Tinokusiya uine akateedzana ezvakakosha matipi ekufamba nezvipfuyo. Matanho atinofanira kufunga nezvayo tisati taenda parwendo.
Nei Kitsi Yangu Idya Jecha: Kazhinji Zvinokonzera
Kana iwe ukaona kuti katsi yako iri kudya jecha kubva mubhokisi remarara, saka zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvakateedzana zvezvikonzero zvaunofanira kuziva kuzvigadzirisa.
Kuda kuziva kwekatsi izvo iwe zvausingazive
Kune akawanda uye akasiyana curiosities ekatsi ayo atinofanira kuziva. Nekuti nenzira iyi tinokwanisa kunzwisisa zvimwe zvinhu zvakawanda zvakavakomberedza.
Kushungurudzika muKitsi: Zvikonzero Zvipfuwo Zvinoshungurudzika
Kushungurudzika mumakati chimwe chinhu chakajairika kupfuura isu chatingafungidzira. Naizvozvo, isu tinofanirwa kutarisa kune izvo zvikonzero uye kuyedza kudzivirira uye kuzvigadzirisa.
Ngwarira mupine mudungwe
Isu tinokuudza maitiro ekuziva iyo inotyisa pine mudungwe kuti udzivirire iyo, sezvo iri mhuka ine huturu kune mhuka dzedu.
Unyengeri kuti katsi arege kukwenya midziyo
Saka kuti katsi dzisatsvaira fanicha panogara paine nhevedzano yezvidobi zvatingaite zviri nyore kwazvo. Uri kuzovasuwa here?.
Maitiro ekuchengeta mhuka dzinovaraidza munguva yechando
Kuchengeta mhuka dzinovaraidza panguva yechando ibasa rakaomesesa. Isu tinofanirwa kuziva kuti ivo vanotambura zvishoma sezvinobvira kubva kumatonhwe epasi.
Zvakanakira kuve nezvipfuwo zvehutano hwepfungwa
Hutano hwepfungwa hwedu hunogona kukwidziridzwa nekuva nezvipfuyo. Nekuti pane zvakawanda mabhenefiti izvo mhuka zvinotipa uye iwe unofanirwa kuwana.
Hutsanana hwakanakisisa hwembwa yako munguva yechando
Hutsanana hwembwa yako hwakakosha kuitarisira uye hutano. Asi munguva yechando, hatidi kuti ubate zvirwere zvakasiyana saka tevera matanho aya.
Zvinodiwa zvepakutanga kuva nezvipfuyo
Kuti uve nezvipfuyo unofanirwa kuva nezvimwe zvakakosha zvinodiwa. Nekuti chipo chaunoita nhasi chinogona kusiiwa mangwana. Funga zvine hungwaru !.
Zvakanakira nekuipira kurara nemhuka dzinovaraidza
Kurara nemhuka dzinovaraidza chiito chinoitwa nevazhinji vedu. Asi zvakanaka here kana zvinopesana? Tsvaga zvakanakira nekuipira.
Nzira yekuchengetedza hutsanana mumba ine zvipfuyo
Isu tinokuudza maitiro ekuchengetedza hutsanana kumba kana tiine mhuka dzinovaraidza, sezvo paine humwe hunyengeri hunogona kubatsira pamba.
Kufarira kwekatsi yePezhiya
Katsi yePezhiya ndeimwe yevanodiwa uye vanoyemurwa. Iine runako rukuru, runako uye runyararo. Usapotsa pane akawanda mamwe mauri!
Nhema dzenhema pamusoro pekati dzaunofanira kukanganwa
Tinokuratidza nhevedzano yengano pamusoro pekati dzaunofanira kukanganwa. Zvinhu zvatagara tichitenda asi izvo manyepo chaiwo.
Tsvaga zvese zviratidzo uye mhinduro dzakanakisa dzekudzvinyirirwa mukitsi. Iwe uchaona sei, chipfuwo chako chinodzokera pakuve chakafanana nenguva dzose
Tricks iwe unofanirwa kuziva kana iwe uine chipfuwo kumba
Isu tinoratidzira akateedzana emazano aunofanira kuziva kana uine chipfuwo kumba. Pfungwa dzakareruka dzekushandisa zuva rega rega.
Chikafu icho hamsters hachifanirwe kudya
Tsvaga kuti ndedzipi zvekudya izvo hamsters dzisingafanirwe kudya nekuti zvinogona kukuvadza zvakanyanya hutano. Tinofanira kudzora, uye zvakawanda, zvavanodya!
Kubatsira kukuru kwekuva nembwa
Usapotsa mabhenefiti akakura ekuti kuva nembwa kunotiunzira. Pasina kupokana, haumbofi wakada kuve usina furry parutivi rwako zvakare.
Nzira katsi dzinofanira kuratidza rudo
Tsvaga kuti ndeapi mafomu kana zviito zvinoratidza kuti katsi dzinofanira kuratidza rudo rwavo kwauri. Zvakawanda. pane izvo zvataurwa, ita chipfuwo chako?
Kuchengetedza kuitira kuti katsi dzako dzirege kupisa
Tinokusiya nemazano akateedzana kuitira kuti katsi dzako dzisatsva muzhizha. Vachengete uye uvachengetedze kubva kumatembiricha akakwirira emwaka wezhizha
Mazororo ari kuuya, ndingasiya kupi katsi yangu?
Tinoda kugara tiine katsi yedu, asi kuuya kwemazororo kunoita kuti tifunge dzimwe nzira dzakanaka dzemunhu wese.
Mahombekombe embwa muSpain, nakidzwa zhizha navo!
Usapotsa kusarudzwa kwemahombekombe kwembwa dzatinowana mupeninsula yese. Nzvimbo dzekuve nenguva yakanaka nezvipfuyo.
Maitiro ekusiya chipfuwo chega pamba pasina kutambura kunetseka
Kuparadzanisa kushungurudzika kunowanzoitika kana chipfuwo chikasiiwa chiri wega kumba kwemaawa marefu. Dambudziko iri rinogona kugadziriswa nenzira dzinoverengeka.
Imbwa dzinogona kuziva manzwiro evanhu
Kana painge pachine chero, zvatova pachena. Kutenda kuongororo yazvino, imbwa dzinogona kusvika pakuziva manzwiro evanhu.
Nzira yekudyisa katsi yedu nenzira kwayo
Kana iwe uine kusahadzika nezve nzira yekudyisa katsi yedu nenzira kwayo, saka usarasikirwa nezano ratinokuratidza uye uchave wakarurama.
Sei imbwa dzichidzingirirana miswe
Tinogona kufunga kuti zvinogona kunakidza asi kana imbwa dziri kudzinganisa miswe yemumwe nemumwe, chirwere chakanyanya kuomarara chinogona kuvanzwa.
Zvikonzero nei zvipfuyo zvichivandudza hutano
Kana uchida mhuka, tinokuunzira mashoko akanaka kwazvo. Mhuka dzinovaraidza dzinovandudza hutano zvinoshamisa. Tsvaga zvavanogona kukuitira!
Kuchengeta kwekutanga kwembwa yakaomeswa
Imbwa yakaomeswa inoda imwe hanya. Pamusoro pekunyorovesa, izvo zvisingambove zviripo, isu tinofanirwa kunge tichiziva zvishoma nezvazvo. Kana iwe uchiri kusaziva kwekutangira, tinokusiira iwe neakanakisa matipi auchazoisa mukuita. Tanga nekukurumidza sezvazvinogona!
Kuchengetedza kuchengetedza zvipfuwo zvako kubva pakupisa
Pane zvakawanda zvekutarisira zvaunofanira kutevera kuchengetedza zvipfuyo zvako kubva pakupisa. Zvimwe zvinogona kuve zvakapusa asi zvakare zvakakosha uye izvo isu hatifanire kukanganwa. Vanoda nzvimbo dzinotonhorera, mvura, uye nhanho shoma dzekudzivirira isingadiwe kupisa sitiroko.
Matipi ekutanga ekutora katsi yakarasika
Kugamuchira katsi yakatsauka chinhu chatakaita kakawanda kana chakayambuka pfungwa dzedu. Nzira yekupa hupenyu huri nani kumhuka isina iyo mukana. Saka nhasi, tinobva nemazano aunofanira kuziva kana uchizopa katsi yakashata mukana wakanaka.
Kunhuhwirira kunokarirwa nekatsi yako
Kune hwema hwakati wandei hunodiwa nekatsi yako uye kuti, pamwe, iwe hauna kana kumboona. Nekuda kwekuti felines ane pfungwa yakasimukira kwazvo yekunhuhwirira uye nekudaro, havapotse kamwe hwema hwekupoteredza. Saka, nhasi tinotaura idzo dzinovapengesa.
Zvikafu zvishanu zvausingafanire kupa imbwa yako
Kunyangwe tichivatadzira zvakanyanya, pane zvimwe zvinhu zvatinofanirwa kudzivirira kuitira kuti hutano hwavo husatambure. Nekudaro, isu tinokuratidza chikafu icho chausingafanire kupa imbwa yako. Neiyi nzira, tichave tichivachengeta zvakatowanda kupfuura zvatinowanzoita.
Uri kuunza kati nyowani mumhuri?
Uri kuenda kunotora katsi yechipiri here? Kana zvirizvo, inotevera mirairidzo mirayiridzo inogona kukubatsira iwe kuvaka hukama hwakanaka neuyo watove nawo.
Zvakanaka here kurara nezvipfuyo zvedu?
Nhasi tinotsaurira chinhu chemumba kuzvipfuyo zvedu zvidiki. Isu tinopindura mubvunzo wekuti zvakanaka here kana kuti kwete kurara nezvipfuyo zvedu.
3 akakurudzira mabhuku ekuchengetedza zvipfuyo
Muchinyorwa chedu chekumba nhasi tinotarisa pane idzo idzo mhuka dzine makumbo mana dzinombo famba dzichitenderedza: katsi nembwa.
Natsiridza kugara zvakanaka kwekatsi yako kumba
Muchikamu chino nezve kumba uye zvipfuwo, tinokuudza maitiro ekuvandudza hupenyu hwekatsi yako kumba. Zano remumwe wako wemhuka anovimbwa naro ndiro rakanyanya.
Nzira yekudzivirira katsi kubva pakutsvaira nzvimbo dzisingadiwe
Muchinyorwa chedu nhasi tinokuudza maitiro ekudzivirira katsi kukwenya nzvimbo dzisingadiwe uye nei vaine tsika iyi.
Waizviziva here kuti mhuka dzinovarairwa dzinoora mwoyo futi?
Kana iwe uri mumwe weavo vaisaziva kuti zvipfuwo zvinowanawo kuora mwoyo muchinyorwa chino tinokuudza zvese nezvazvo. Zviratidzo uye maitiro ekugadzirisa dambudziko.
Kugeza mbwanana yako usingashandise mvura
Muchikamu chino tinokuudza kuti ungashambidze sei mbwanana yako usingashandisi mvura uye nei zvichikosha kuti uzviite nenzira iyi, sekufunga kwema veterinarians.
Autumn zvishongedzo zvezvipfuyo zvedu
Munyaya yanhasi Yekumba neyeMhuka dzinovaraidza tinorangarira iyo yekupedzisira: Autumn zvishongedzo zvezvipfuyo zvedu. Usavarega vachitonhora.
Zvirwere zvakajairika mumakati akura kupfuura makore masere
Muchinyorwa chanhasi tinokuunzira zvirwere zvakajairika mumakati anodarika makore masere ekuberekwa, pamwe nezviratidzo zvavo. Tarisa zvakanaka kune yako feline.
Imbwa shanu dzinodakadza imbwa dzatinogona kuva nadzo padhuze napo
Muchinyorwa chedu pamusha nezvipfuwo nhasi tinokuudza kuti ndedzipi shanu dzinodakadza imbwa dzemhando dzatinogona kuve nadzo padhuze napo.
Inishuwarenzi yako yemumba inogona kuvhara chipfuwo chako
Wanga uchiziva here kuti yako inishuwarenzi yekumba inogona kuvhara chipfuwo chako? Kana iwe usati uchinyatso kujekeswa nezve iwo mapoinzi ayo inishuwarenzi anofukidza, verenga zvakare, zvingakushamise iwe.
Mitemo yekufamba imbwa yako muzhizha
Iyi mimwe yemitemo yekutanga yekufamba imbwa yako muzhizha. Usazviise pachena kune tembiricha yakakwira, yeuka kuti havana gland gland.
Inodzivirira katsi nembwa kubva kunhata, umhutu uye zvikwekwe
Kunze kwekunyudza imbwa dzedu nekatsi kwakakosha zvakanyanya munguva yezhizha, apo nhata, zvikwekwe uye umhutu zvinobuda mukusasimba.
Zvirwere zveganda zvakajairika imbwa
Muchinyorwa chemazuva ano chechipfuva tinopa zvirwere zveganda zvakajairika imbwa: mhombwe, mange, dermatitis uye allergies.
Maitiro ekudzivirira parachute cat syndrome
Iwe unoziva iyo parachuti katsi chirwere? Mahwindo akachengeteka uye madheki nemambure kuitira kuti kati yako isatambura kudonha nekukuvara.
Tricks kubvisa katsi bvudzi kubva kumba
Katsi dzinorasikirwa nevhudzi gore rese. Pane hunyengeri hwakawanda hwekubvisa bvudzi rekatsi kubva pamakapeti, upholstery nemamwe makona. Tinokuratidza.
Yekupedzisira minifomu yeHalloween yekitsi nembwa
Kana Halloween yawira pauri uye kusvika panguva yekupedzisira iwe usati wafunga kuti iwe unogona zvakare kupfekedza chipfuwo chako, isu tinokubatsira iwe kuti ubude mumatambudziko.
Imbwa kana katsi? Tsvaga kuti ndechipi chakanakisa chipfuyo chako
Kana iwe uchida kuwana chipfuwo uye iwe hauna chokwadi pakati pembwa nekatsi, nhasi tinoda kukubatsira iwe kuti uite pfungwa dzako pakupedzisira.
Misiyano pakati pevanoda katsi uye vanoda imbwa
Kana iwe uri akawanda katsi kana kana iwe uri wakawanda wembwa, ramba uchiverenga nekuti iwe uchada kuziva mutsauko wehunhu pakati pevanhu vane katsi kana imbwa.
8 zvikonzero zvekutora chipfuwo chako panzvimbo pekutenga icho
Kana iwe uri kufunga kuve nechipfuwo, tinokurudzira kuti iwe ufunge nezve kutora usati watenga. Ndiyo sarudzo yakanyanya kunzwira tsitsi.
Zvakanakira kuve nekatsi
Kana uine katsi uchinzwa rombo rakanaka uye kana zvisiri, funga kuva nazvo. Tsvaga ese mabhenefiti epanyama uye epanyama ekuva nemhuka iyi kunge chipfuwo.
"Sae Saver", kititi chekutanga chekubatsira kuchengetedza nyuchi
Kunyangwe isu tichifunga kuti nyuchi yakafa pane asphalt, inongoneta uye inoda kuwana simba zvakare. Isu tinokupa iwe inotakurika yekutanga rubatsiro gadget yenyuchi.
Double imbwa leash
Muchikamu chino tinokuratidza imbwa leash ine yakazvimirira chishandiso chembwa imwe neimwe. Nenzira iyoyo havazosanganisike uye kutasva kunonakidza.
Zviduku zvezvipfuwo zvakagadzirwa nekohwe
Crochet mhuka diki dzichishandisa nzira dzakasiyana siyana
Zvirambidzo zvekudya kune chipfuwo chako
Chero ani wedu ane chipfuwo achaziva kuti, pazviitiko zvakawanda, ivo "vanotibvunza" isu nezve zvatiri kudya ...
Kurapa mhuka dzinovaraidza
Zvakambopfuura nepfungwa dzako here kuti chipfuwo chako chakangwara zvekuti anongoda kutaura? Y…
Tora Imbwa V - Kudya
Kudyisa shamwari yako nyowani kwakanyanya kukosha. Zviri nyore kutanga kudyisa imbwa yako nayo ...
Chipfuwo changu inguruve yeGuinea (guinea nguruve)!
Iyo Guinea yenguruve igonzo rinozvarwa kuSouth America (Peru, Colombia, Venezuela) iyo yaive yatove kuberekwa kupfuura ...
Chii chaunofanira kuita kana chipfuyo chako chikatambura tsaona?
Zano rakajairwa: Chekutanga pane zvese, dzikama kwazvo Chinhu chekutanga kutarisa kuti chipfuwo hachiziva here. Panyaya ye…
Isu tiri mukutarisira kwekuona kuti shamwari dzedu dzeshamwari dzinoteedzera chikafu chine hutano uye chakapfuma uye, kana zvichidikanwa, bvunzai ...
Hupenyu hwekugara hwekati
Nepo katsi dzinogara mumigwagwa dziine hupenyu hunotarisirwa hwemakore maviri kusvika mana, iyo ...
Neichi chinyorwa isu tinoda kukupa iwe zvimwe zvikonzero nei katsi yako ichida zvipikiri uye ivo vari chikamu chake ...